EKWEREMADỤ KAGA-ABỤKWA OSOTE ONYEISI SINETI – hoo!haa!!
Abụja: Ozi na-erute anyị ntị ugbua gosiri na Onye ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC bụ Sinetọ Bola Tinubu e nweela nsogbu.
Etu ihe si kwụrụ ugbua, APC tiwazịrị ụzọ abụọ maka ndọrọndọrọ ndị ga-anọ n’isi na ngalaba Omebeiwu nke Gọọmenti Naijiria.
Tupu ugbua, Tinubu bubu n’obi ime ka o si eme site na itinye ndị nile ga-anọ n’isi ngalaba Omebeiwu Ala anyị mana “asụrụ asụ amaghịzị ebe e desere ọdụ”.
Onye nọ n’isi ndị a chọrọ ịkuri Tinubu site na nkwado Buhari bụ Gọvanọ Nasir El-Rufai nke Kaduna Steeti. Ndị ọzọ na-adọnyere ya ukwu gụnyere Minista na-ahụ maka Ọkụ/Ọrụ/Iwu Ụlọ bụ Babatunde Fashola, Gọvanọ Ekiti bụ Kayode Fayemi, Gọvanọ Ondo bụ Rotimi Akeredolu, ndị Gọvanọ APC nile nọ na mpaghara Mgbago Ugwu ma tinyere ọtụtụ ndị nwere agba na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị, ndi ike Tinubu gwuworo maka etu sọọsọ ya si bụrụ “omee ọkachie” nakwa eze onye agwalam.
O doro ewu n’ọkụ ọ anya na Buhari ga awụ Tinubu n’ala mana amaghịzị na ịka Jagaban nku GA-EBIDO ozigbo ozigbo. Mgbe e jiri mara na agha dị bụ oge Tinubu si Legọs bụrụ mmemme ncheta ọmụmụ ya bugakwuru Buhari n’Abuja mana Onye isiala gbakụtara ya azụ. Nkea mezịrị Tinubu ji hapụ Onyeisiala gawa Ala Bekee mgbe Onyeisiala bịara Legọs na nso a.
N’ihi esemokwu a, ndị nile Tinubu wepụtara ịzọ ọkwa ma na Sinetọ ma n’ụlọ nzukọ nke nta abụrụla ndị ajọ chi maka ndị otu El-Rufai ekpebiela na onye ọbụla Tinubu wepụtara ga-ada dawaa ukwu. Nkea metụtazịrị Sinetọ Ahmed Lawan, nke mpaghara Mgbago Ugwu Yobe Steeti, onye na-azọ ọkwa Onyeisi Sineti nakwa Femi Gbajabiamila na-anọchite anya mpaghara Surulere, Legọs Steeti, onye na-azọ ọkwa ịbụ ọnụ na-ekwuru Ụlọ Nzukọ Omebeiwu nke nta. A hụtara ha abụọ ka ndị otu Tinubu/Oshiomole.
O dobeghi anya ma ndị otu El-Rufai a ga-akwado Sinetọ Ali Ndume na-azọ kwa ọkwa ya bụ Onyeisi Sineti ka ọ nwere onye ọzọ ha bu n’obi mana ha ga-akpa so onye ọbụla bụ onye otu Tinubu agwa dịka onye ekpenta.
Site n’otu a egwu siri dagharịa, dị ị ka ha aga-enwe ọnụ ikpebi ndị ga-anọ n’isi na ya bụ ngalaba Omebeiwu. Ugbua, APC nwere sinetọ iri isii n’abuo(62) ebe PDP nwere iri atọ n’asaa (37). N’ụlọ nzukọ Omebeiwu nke nta, ndi APC dị Narị abụọ n’iri n’otu (211) ebe ndị PDP dị Otú Narị n’iri n’otu (111). Nkewa dị n’etiti ndị APC ga-emezu ka ọ bụrụ ndị PDP ga-ekpebizi ndi ga-emeri.
Site n’ozi anyị nwetara, Sinetọ Ike Ekweremadụ, dika “ehi na enweghị ọdụ chi ya na-achụrụ ijiji” kaga-abụkwa Osote Onyeisi Sineti Naijiria dịka ihe siri gbata kwụrụ ugbua
Previous Post: EJIDELA NWANYỊ TINYERE NWA AFỌ ISII N’IGBE NJUOYI
Next Post: “Word4Word Art Project”na-afịọ n’Enugwu